Great Battle - Su Yi Xing - Wattpad
1.3K Reads 194 Votes 12 Part Story
By angelic_myat Ongoing - Updated May 23
အန်းရှီးရဲ့ ကံကြမ္မာတင် မကပါဘူး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ ကံကြမ္မာကိုပါ ဝေမျှချင်တာပါ .............
Started Date:  17/Dec/2018
ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံးပါ။ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိမယ်မှန်း သိပေမယ့် ဒီ bromance လေးကို ကိုယ်သဘောကျလွန်းလို့ ချရေးမိလိုက်တာပါ။ အများကြီး ဖတ်ကြမယ်လို့လည်း မမျှော်လင့်ရဲပါဘူး။ တကယ်လို့ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အရေးအသားပိုင်းက လိုအပ်ချက်တွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော်....
Original Movie :  Great Battle
Original movie ကတော့ bl လို့မပြောထားပါဘူးနော် but ကိုယ်က bl လို့ခံစားပြီး လိုသလို ဆွဲရေးမှာပါ xD
Get notified when Great Battle is updated
#686 in love See all rankings
ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒဏ္ဍာရီ (စာစဉ် ၁မှ စာစဉ် ၆ ပထမ...
138K 19.2K 200
Xianxia world ( ဗုဒ္ဓ နှင့် တာအို ၀ါဒကို အခြေခံထားတဲ့ သိုင်း ၀တ္ထု အမျိုးအစား)
Desolate era လို့ခေါ်တဲ့ အဆုံးမဲ့ ပျက်စီးမှုတွေသာရှိတဲ့ အချိန်ကာလမှာ မျိုးနွယ်စုတွေဟာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် မိုးကောင်းကင် ၊ ကမ္ဘာမြေကြီး နဲ့ နတ်ဆိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နေကြ၇တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မသေခြင်းလမ်းစဉ်ကို ကျင့်ကြံသူတွေဟာ ပျက်စီးခြင်းတွေ ကပ်ဘေးတွေ နဲ့ ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ အသက်ကို မနှမြောပဲ ကျင့်ကြံနေကြပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ အရမ်းအစွမ်းထက်လှတဲ့ မျိုးနွယ်စုကနေပြီးတော့ ဂျိနင် (Ji ning) မွေးဖွားလာပါတယ်။
မူရင်း စာရေးဆရာ : I Eat tomatoes
မူရင်းဝတ္ထု - Desolate era
ဘာသာပြန် စာရေးဆရာ - Dr - Panda
ဖေ့ဘုတ်တွင် @drpanda88 ဟု search တွင်ရိုက်၍ ရှာနိုင်ပါသည်။
အချိန်ပေးဖတ်ပေးသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
မဟေသီ(Myanmar Historical Fic)
300 37 4
ကိုယ့်မှာ လူပီသတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသလို
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာ လူတစ်ယောက်
ထင်ရှားကျော်ကြား တရုတ်ရိုးရာ ဝတ္ထုတိုများ
11.4K 1.4K 38
ရိုးရာဝတ္ထုတို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Credit to : Original Author
❝မီးလျှံ ၌သောကတို့ နစ်မွန်းစေ | မြန်မာဘာသာပြ...
810 107 7
•Lie Huo Jiao Chou
•မီးလျှံတွင်း၌ သောကတို့ နစ်မွန်းစေ
•Drowning sorrows with Raging Fire
•Priest လက်ရှိရေးနေတဲ့ ဝတ္ထု ဖြစ်ပါတယ်။
•English ဘာသာပြန်ကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ Sha Po Lang English ဘာသာပြန် editor ရဲ့ wattpad account @Vermilionbird_trans  မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
- မြန်မာဘာသာပြန်ကြသူများ :
魔道祖师 番外 缅语翻译
155K 17K 616
Children of A Lesser God [ Own Creation ]
4.5K 306 24
The cover art is not mine and it's credited to the artist.
ဗိသုကာပညာရပ်ကိုသင်ကြားနေသော Bai Xing Fu အဖို့
နောက်ဆုံးနှစ်မရောက်ခင်အထိ ပျော်ရွှင်သော ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခန်းဖော်ဖြစ်လာသော ကျောင်းသားအသစ် An Xi နှင့် ယခင်ကအထက်တန်းကျောင်းအတူတက်ခဲ့သော်လည်း အတိတ်မေ့နေခဲ့သော Xing Fu က မမှတ်မိခဲ့ပေ။ ကျောင်းသားသစ် An Xi နှင့် သူ့အကြားမှ ရှုပ်ထွေးလှသော နောက်ကြောင်းဇာတ်လမ်းများအပြင် သူနှင့်သူ့သူငယ်ချင်းများက An Xi အပေါ်တွင် သံသယများစွာဝင်လာခဲ့ကြသည်။
[ You are my trauma ကို Children of A Lesser God ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြည့်စုံတဲ့လူသားတွေ ချို့တဲ့တဲ့လူသားတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲရတဲ့လူသားတွေကိုတော့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲ သူ့ထက် တန်ခိုးနည်းပြီး ရာထူးငယ်တဲ့ ဘုရားသခင်တစ်ပါးပါးက ဖန်ဆင်းခ
460 19 38